Iindaba - Ngaba Iingcebiso ngePipette eziCociweyo ngenene ziyakuthintela ukungcoliseka komnqamlezo kunye neeAerosols?
Isigubungelo sokuvavanywa kweThemometha
I-Ear Otoscope Specula
Ngaba Iingcebiso ngePipette ezicociweyo ziyakuthintela ukungcoliseka kunye neAerosols?
Kwilabhoratri, izigqibo ezinzima zenziwa rhoqo ukumisela eyona ndlela yokwenza uvavanyo olunzima kunye novavanyo. Ixesha elingaphezulu, iingcebiso zepipette ziye zahlengahlengiswa ukuze zilungele iilebhu kwihlabathi liphela kwaye zibonelele ngezixhobo ukuze amagcisa kunye nososayensi babenakho ukwenza uphando olubalulekileyo. Oku kuyinyani ngakumbi njengoko i-COVID-19 iqhubeka nokusasazeka kulo lonke elaseMelika. I-Epidemiologists kunye ne-virologists basebenza ubusuku nemini ukuza kunyango lwentsholongwane. Iingcebiso zefipette ezicociweyo ezenziwe ngeplastikhi zisetyenziselwa ukufundisisa intsholongwane kwaye ezazikade zinamandla, iipipettes zeglasi ngoku zilungile kwaye zizenzekelayo. Zingama-10 iingcebiso zepayipi zeplastikhi ezisetyenziselwa ukwenza uvavanyo olunye lwe-COVID-19 okwangoku kwaye uninzi lweencam ezisetyenzisiweyo ngoku zinokucoca ulwelo kubo ekufanele ukuba kuthintele i-100% yeeerosol kunye nokuthintela ukungcoliseka komnqamlezo xa kusenziwa isampulu. Kodwa zingakanani ezi ngcebiso zibiza kakhulu kwaye zibiza indalo kwaye zixabisa iilebhu kwilizwe liphela? Ngaba iilebhu kufuneka zithathe isigqibo sokulahla isihluzo?
Kuxhomekeke kuvavanyo okanye kuvavanyo, iilebhu kunye namaziko ophando aya kukhetha ukusebenzisa iingcebiso ezingacocwanga okanye ezicociweyo zepipette. Uninzi lweelebhu zisebenzisa iingcebiso ezihluziweyo kuba zikholelwa ukuba izihluzi ziya kuthintela zonke iiarosol ekungcoleni isampulu. Iifilitha zihlala zibonwa njengeendleko ezifanelekileyo zokuphelisa ngokupheleleyo umkhondo wongcoliseko kwisampulu, kodwa ngelishwa oku akunjalo. Iifilitha zephepha le-polyethylene pipette aluthinteli ungcoliseko, kodwa endaweni yoko lucothisa ukusasazeka kokungcoliseka.
Inqaku lakutshanje leBiotix lithi, “[igama] isithintelo yinto engeyiyo igama kwezinye zezi ngcebiso. Kuphela ziingcebiso zokugqibela eziphezulu ezibonelela ngesithintelo sokwenene sokutywina. Uninzi lwezihluzi luyalucotha ulwelo lungangeni kumgqomo wombhobho wepipette. ” Izifundo ezizimeleyo zenziwe kujongwa ezinye iindlela zokucoca ulwelo kunye nokusebenza kwazo xa kuthelekiswa neengcebiso ezingezizo zokucoca ulwelo. Inqaku elipapashwe kwiJenali yeApplied Microbiology, eLondon (1999) lifunde ngokusebenza kweengcebiso zeefilitha ze polyethylene xa zifakwa esiphelweni sokuvulwa kwesiponce sepipette xa kuthelekiswa neengcebiso ezingacocwanga. Ngaphandle kovavanyo lwe-2620, i-20% yeesampulu ibonakalise ukungcola kwe-carryover kwimpumlo yepipettor xa kungasetyenziswanga isihluzi, kwaye i-14% yeesampulu zazingcolisiwe xa kusetyenziswa icebo lokucoca i-polyethylene (PE) (Umzobo 2). Uphononongo lufumanise ukuba xa ulwelo olunemitha yeathom okanye iplasmid iDNA yafakwa umbhobho ngaphandle kokucoca ulwelo, ungcoliseko lombhobho wombhobho wenzeka ngaphakathi kwe-100 imibhobho. Oku kubonisa ukuba nangona iingcebiso ezihluziweyo zinciphisa inani lokungcoliseka komnqamlezo ukusuka kwincam enye yombhobho ukuya kwenye, amacebo okucoca akayeki ungcoliseko ngokupheleleyo.
Ixesha lokuposa: Aug-24-2020
Ngokuzama okunyamezeleyo kule minyaka imbalwa idlulileyo, i-ACE ikhule yangangomnye wabavelisi abakhokelayo kunye nabathengisi bezinto ezisetyenziswayo zelebhu kunye nonyango.Siza kuqinisekisa abathengi bethu ngeemveliso neenkonzo ezilungileyo.
I-Suzhou ACE Biomedical Technology Co, Ltd.